Dukaanka cusub ee Apple ee Hunan oo la furi doono September 4 | Waxaan ka imid mac
Dukaanka Apple ee cusub ee Hunan oo la furi doono 4 -ta bisha September
Dhamaadka Ogosto, waxaan kugu wargelinaynaa furitaanka soo socda ee cusub Apple Store China, magaalada Changsha (gobolka Hunan), dukaan cusub oo aan noqon doonin kii ugu dambeeyay tan iyo bishaan oo dhan, Apple waxay qorsheyneysaa inay furato dukaan kale oo Apple ah, markan Wuhan, gobolka Hubei.
Iyada oo loo marayo mareegaha Apple ee Shiinaha, shirkadda Tim Cook ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday taariikhda marka Apple Changsha albaabada u furi doonto. Waxa xigi doona Sabti, Sebteembar 4 markay tahay 10 subaxnimo xilliga maxalliga ah.
Dukaankan cusub ee Apple wuxuu ku yaallaa xarunta dukaamaysiga ee IFS ee caanka ah, dukaan leh dherer laba jibaar ah oo bixin doona dhammaan sifooyinka iyo adeegyada ay Apple leedahay Waxay si joogto ah ugu fidisaa dhammaan bakhaarradeeda adduunka oo dhan, oo ay ku jirto Maanta fasallada fool-ka-foolka ah ee Apple, fasallada bilaabmi doona maalinta ka dambaysa furitaanka.
Bogga Apple ee dukaankan cusub, waxaan ka akhrisan karnaa:
Laga soo bilaabo iridda gudaha ee xarunta dukaamaysiga, macaamiishu waxay isla markiiba ka heli doonaan Madasha iyo cajalad -fiidiyaha gaarka ah, kaas oo martigalinaya Maanta fadhiyada Apple. Waxaa hogaaminaya mihnadlayaasha hal abuurka Apple, kalfadhiyada maalinlaha ah ee bilaashka ah waxay bixiyaan dhiirigelin hal abuur leh, baraan xirfado wax ku ool ah, waxayna ka caawiyaan macaamiisha inay bartaan inay sii wataan alaabtooda Apple. Si loogu dabaaldego furitaanka weyn, xirfadleyda hal -abuurka ah waxay martigelin doonaan Maanta gaarka ah fadhiga Apple "Socodka Farshaxanka: Baro Midabada Changsha" laga bilaabo Sebtember 5, siinaya macaamiisha fursad ay ku sahamiyaan magaalada oo ay ku qabsadaan midabbada firfircoon ee iPad Pro.
Apple waxay u baahan doontaa dhammaan macaamiisha inay xirtaan maaskaro wejiga Si aad u gasho gudaha, maaskaro ay shaqaalaha dukaanku isticmaali doonaan. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan macaamiisha ayaa la cabbiri doonaa heerkulka kahor intaysan gelin dukaanka waxaana si naxariis leh looga codsanayaa inay ilaaliyaan fogeynta bulshada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukaanka Apple ee cusub ee Hunan oo la furi doono 4 -ta bisha September
Telegram for Mac waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 8.0